Shuruud caynkee ah ayaa looga baahan yahay dadka Doonaya ka mid noqoshada Xubnaha Aqalka Sare ee Galmudug? | Baydhabo Online
Shuruud caynkee ah ayaa looga baahan yahay dadka Doonaya ka mid noqoshada Xubnaha Aqalka Sare ee Galmudug?
Guddiga Doorashooyinka Heer Dowlad Goboleed ee Maamulka Galmudug, ayaa soo bandhigay Shuruudaha laga doonaayo ruuxa ka mid noqonaya Xubnaha Aqalka Sare ee ka imaanaya Deeganada Maamulka Galmudug.
Xilligaan waxaa si dar dar leh ku socda loolanka loogu jiro ka mid noqoashada Xubnaha Aqalka Sare ee dalka iyo sidoo kale Aqalka hoose, iyadoo Magaalada Cadaado ay ka socdaan shirar kala duwan oo la xiriira arimahaasi, halka arimaha la xiriira Doorashooyinka iyo Ergooyinka ay marayaan meel wanaagsan.
Afhayeenka Guddiga Doorashooyinka Maamulka Galmudug Yuusuf Maxamed oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Cadaado, ayaa wuxuu shaaciyay Shuruudaha looga baahan yahay inuu soo buuxiyo ruuxa doonaya ka mid noqoshada Xubnaha Aqalka Sare ee Maamulka Galmudug.
1:Qof kasta oo haaya Xil Siyaasadeed ee doonaya Aqalka Sare, sida Xubin Baarlamaan, Wasiir heer Gobol ama Taliye ciidan waa inuu iska casilaa xilka uu haayo.
2: Inuu haysto Shahaado Dugsiga Sare ama wax u dhigma.
3: Inuu bixiyo lacag dhan $10,000 oo Doollarka Mareykanka ah taas oo laga rabo xubin kasta oo u tartameysa aqalka sare.
4:In Madaxweynaha Galmudug uu u soo gudbiyo Guddiga Doorashada ruuxa doonayaa inuu u tartamo Aqalka Sare ee dalka ugu dambeyn 5-ta Bisha.
Guddiga Doorashooyinka Heer Dowlad Goboleed ee Maamulka Galmudug, ayaa wuxuu sheegay ugu dambeyn Maalinta Arbacada in laga doonaayo dadka u tartamaya xilkaan inay u gudbiyaan Warqadahooda Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed.